आगोसँग खेल्दै छ भारत ? - Naya Patrika
आगोसँग खेल्दै छ भारत ?
आगोसँग खेल्दै छ भारत ? – ताइवान कार्ड खेल्दै गर्दा भारतीयले भुलिरहेका छन् कि उनीहरू स्वयं कैयौँ संवेदनशील मुद्दासित जुधिरहेका छन् । एक चीन नीतिको सीमा पार गरे पनि भारतीयले यसलाई वहन गर्न सक्दैनन् ।
यही १४ डिसेम्बरमा ताइवान र भारतबीच औद्योगिक सहयोगलाई लिएर एक एमओयुमा हस्ताक्षर भएको थियो । यस सम्झौतालाई लिएर चीन र ताइवानका मिडियामा प्रशस्त हल्लीखल्ली मच्चिएको देखिन्छ । एकातिर ताइवानी मिडियामा सम्झौताको प्रशंसा गरिँदै छ । यसबाट दुवै पक्षबीच व्यापार तथा लगानी वृद्धि हुने बताइँदै छ ।
अर्कातिर चीनको सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले यस सम्झौतालाई लिएर भारतलाई चेतावनी दिएका छन् । ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ– भारत ताइवानको विषयमा आगोसित खेलिरहेको छ । उसले यस सम्झौतामाथि भारतीय कूटनीतिज्ञहरूको टिप्पणीलाई आधार बनाएर भारतको तीखो आलोचना गरेको छ । उसले लेखेको छ– भारतीय बुद्धिजीवीले यसलाई दुवै पक्षबीचको अत्यावश्यक राजनीतिक तथा रणनीतिक सम्बन्धको नाम दिएका छन् ।
सम्झौताबारे चिनियाँ मिडियाको आक्रोश
ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ– यद्यपि ताइवानको सवालमा कुनै सरकारीस्तरको मुद्दा छैन । तैपनि, केही भारतीय लगातार मोदी सरकारलाई सल्लाह दिइरहेका छन् कि उनी ताइवान कार्ड उपयोग गरून् र एक चीन नीतिको विषयमा चीनबाट फाइदा उठाऊन् । यो बुझाइ आर्थिक मुद्दाबाट निकै अघि छ र भारत–चीन सम्बन्धका लागि खतरनाक सावित हुन सक्छ ।
ग्लोबल टाइम्सले अगाडि लेखेको छ– यथार्थमा ताइवान कार्ड खेल्दै गर्दा भारतीयले भुलिरहेका छन् कि उनीहरू स्वयं कैयौँ संवेदनशील मुद्दासित जुधिरहेका छन् । भारतले यसलाई ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ कि एक चीन नीतिको सीमा पार गरे पनि उनीहरूले यसलाई वहन गर्न सक्दैनन् ।
पत्रिकाले थप लेखेको छ– भारत ताइवानबाट लगानी आकर्षित गर्न लालायित छ । तर, ताइवानी नेता साई इंग वेनको राजनीतिक उद्देश्यलाई लिएर सतर्क रहनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । ताइवानी प्रशासन भारतको टेलिकम्युनिकेसन, स्टिल र सूचना उद्योगमा लगानी प्रोत्साहित गरिरहेको छ । दुवै पक्षबीचको यो सम्बन्ध आर्थिकभन्दा पनि राजनीतिक बढी छ ।
चिनियाँ पत्रिकाले ताइवानी राष्ट्रपति साई इंग वेनलाई पनि चेतावनी दिएको छ । ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ– साई इंग वेन खतरासित खेलिरहेकी छिन् । उनी ताइवानको स्वतन्त्रताको एजेन्डामा काम गरिरहेकी छिन् । उसले अगाडि लेखेको छ– भारतले ताइवान कार्डको माध्यमबाट दबाब बनाएर डोकलाम गतिरोधको बदला लिन सकिन्छ भन्ने सोचेको छ भने त्यो उसको भ्रम हो । भारतले ताइवान कार्ड उपयोग गर्‍यो भने दुवै देशले राम्रो सम्बन्धको जुन लामो दूरी तय गरेका छन्, त्यो समाप्त हुन समय लाग्नेछैन ।
ताइवानी मिडियामा प्रशंसा
ताइवान र भारतबीच सम्पन्न सम्झौतालाई लिएर ताइवान टुडेले लखेको छ– ताइपेई इकोनोमिक एन्ड कल्चरल सेन्टर (टिइसिसी) का प्रतिनिधि तियान चुंग क्वांगले नयाँदिल्लीमा भारतीय कूटनीतिज्ञ श्रीधरन मधुसूदनसित यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्झौताबाट दुवै देशको सम्बन्ध थप सुमधुर हुनेछ ।
टिइसिसीको भनाइ छ कि भारतका साथमा सम्पन्न यो सम्झौता ठूला व्यापारिक घरानासित यसअघि भएका २१ सम्झौताकै हिस्सा हो । ताइपेईमा १२ अक्टोबरमा दुवै देशबीच औद्योगिक सहयोग सम्मेलन भएको थियो । सरकारी तथ्यांकअनुसार भारत र ताइवानबीचको व्यापारमा वृद्धि भएको छ । ०१७ का सुरुका नौ महिनामा दुवै देशबीच ४ दशमलव ७ अर्ब डलरको व्यापारमा ४० प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।
मोदीले दिए सम्बन्धलाई गति
मोदीको हातमा शासनसत्ता आएपछि भारतको विदेश नीतिको एक अहम् दर्शन ‘लुक इस्ट’ लाई ‘याक्ट इस्ट’ भनियो । कैयौँ विशेषज्ञको मतअनुसार भारतको मोदी सरकारले ‘याक्ट इस्ट’ नीतिअन्तर्गत ताइवानसितको सम्बन्धलाई बढावा दिइरहेको छ । भारतले १९५० मा ताइवानसित द्विपक्षीय सम्बन्ध समाप्त गर्दै पिपल्स रिपब्लिक अफ चाइनालाई स्वीकार गरेको थियो । भारतले यो काम आफ्नो स्वतन्त्रताको केही वर्षपछि नै गरेको थियो ।
शीतयुद्धको युगमा भारत र ताइवानबीचको अनौपचारिक सम्बन्ध बिग्रेको थियो । भारत गुटनिरपेक्ष समूहमा गएको थियो र ताइवान अमेरिकी नेतृत्वको समूहमा सामेल भएको थियो ।